ဟောင်ကောင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် စွက်ဖက်ခြင်း မရှိကြောင်း ထိုင်ဝမ် ပြော | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ဟောင်ကောင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် စွက်ဖက်ခြင်း မရှိကြောင်း ထိုင်ဝမ် ပြော
TOPSHOT - Protesters display placards duringademonstration in Taipei on June 16, 2019, in support of the continuing protests taking place in Hong Kong againstacontroversial extradition law proposal. - Tens of thousands of people rallied in central Hong Kong on Sunday as public anger seethed following unprecedented clashes between protesters and police over an extradition law, despiteaclimbdown by the city's embattled leader. (Photo by Sam YEH / AFP) (Photo credit should read SAM YEH/AFP/Getty Images)
ဟောင်ကောင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် စွက်ဖက်ခြင်း မရှိကြောင်း ထိုင်ဝမ် ပြော
ဟောင်ကောင်ဒေသ မတည်ငြိမ်မှုဖြစ်အောင် ကြားဝင်စွက်ဖက်မှု မရှိကြောင်း ထိုင်ဝမ် တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မှာ သုံးလကျော်ကြာဖြစ်နေတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ထိုင်ဝမ်နဲ့ ဆက်နွယ်မှု ရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲမှုတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ထိုင်ဝမ်ဘက်က အခုလို တုံ့ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟောင်ကောင် မတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ရတာဟာ ဆန္ဒပြသူတွေ တောင်းဆိုချက်ကို တရုတ်အစိုးရက လက်ခံဆွေးနွေးခြင်း မရှိတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်ဝမ် ပြည်ပရေးရာကောင်စီက ပြောပါတယ်။
စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှုမရှိဘဲ ဟောင်ကောင်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အစိုးရအနေနဲ့ ဟောင်ကောင်မှာ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းအောင် လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ လူအခွင့်ရေး လေးစားလိုက်မှုတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးရမယ်လို့ ထိုင်ဝမ် ပြည်ပရေးရာ ကောင်စီက ပြောပါတယ်။
ဟောငျကောငျ မတညျမငွိမျဖွဈအောငျ စှကျဖကျခွငျး မရှိကွောငျး ထိုငျဝမျ ပွော
ဟောငျကောငျဒသေ မတညျငွိမျမှုဖွဈအောငျ ကွားဝငျစှကျဖကျမှု မရှိကွောငျး ထိုငျဝမျ တာဝနျရှိသူတှကေ ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
ဟောငျကောငျမှာ သုံးလကြျောကွာဖွဈနတေဲ့ ဆန်ဒပွပှဲတှမှော ထိုငျဝမျနဲ့ ဆကျနှယျမှု ရှိတယျလို့ စှပျစှဲမှုတှေ ထှကျပျေါလာပွီးနောကျ ထိုငျဝမျဘကျက အခုလို တုံ့ပွနျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ ဟောငျကောငျ မတညျငွိမျမှုဖွဈရတာဟာ ဆန်ဒပွသူတှေ တောငျးဆိုခကျြကို တရုတျအစိုးရက လကျခံဆှေးနှေးခွငျး မရှိတာကွောငျ့ဖွဈကွောငျး ထိုငျဝမျ ပွညျပရေးရာကောငျစီက ပွောပါတယျ။
စစေ့ပျဆှေးနှေးမှုမရှိဘဲ ဟောငျကောငျမှာ ဖွဈနတေဲ့ ပွဿနာတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျမှာ မဟုတျကွောငျး၊ တရုတျ ကှနျမွူနဈပါတီ အစိုးရအနနေဲ့ ဟောငျကောငျမှာ နိုငျငံရေး ပွုပွငျပွောငျးလဲမှု၊ ဒီမိုကရစေီ ဖွဈထှနျးအောငျ လုပျဆောငျမှုနဲ့ လူအခှငျ့ရေး လေးစားလိုကျမှုတှေ ဖွဈအောငျ လုပျဆောငျပေးရမယျလို့ ထိုငျဝမျ ပွညျပရေးရာ ကောငျစီက ပွောပါတယျ။
Previous articleကလေးစစ်သား စုဆောင်းမှု အရာရှိ ၉၆ ဦးနဲ့ တခြားအဆင့် စစ်သည် ၃၅၂ ဦးကို အရေးယူခဲ့
Next articleကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့ အရည်အသွေးတိုးတက်စေဖို့ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုညီလာခံ ကျင်းပမယ်